Qisadii Cajiibka Aheyd Ee Dhex Martay Nabi Daa’uud Iyo Malakul Mowt Wax Badan Ka Faaideyso. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: May 2, 2015, 12:00 am
Nabi Daa’uud wuu Qiiro badnaa, markuu Guriga ka baxaayo Xaasaskiisa ayuu kor uga xiri jiray, intaas ka dib maalintii dambe ayuu Safray, Haweenkiina guriga ayuu kor uga xiray.
Haddaba, mid ka mid ah Haweenkiisa ayaa Guriga kor uga soo baxday, waxeyna aragtay Nin guriga Baryadiisa dhex taagan, wey noqotay oo Islaamihii kale ayey weydiisay, iyadoo leh Ninka Barxadda taagan muxuu ahaa? Xageese ka soo galay, Guriga wuu xiran yahee? Ee Ninkaas wuxuu rabaa inuu Daa’uud inagu Ceebeeyo.
Haddaba, Daa’uud ayaa Safarkii ka soo laabtay oo arkay Ninkii oo Deerka guriga dhex taagan, wuxuuna ku yiri:- Kumaad aheyd? ka dib Ninkii Ayaa ugu jawaabay:- waxaan ahay mid aan Boqor ka Cabsan, wax celin karaana aanu jirin.
Haddaba, Daa’uud wuu fahmay, wuxuuna ku yiri:- Wallaahi Malakul Mowt ayaa tahay. (sidaas ayaana Nafsaddiisa looga qaaday Nabi Daa’uud CS).
(ILAAHOOW TOWBADA NA WAAFAJI).